Indlela yokufaka i-Clipless Pedals
Izicathulo ezingenanto ezingalunganga izicathulo. (c) uDavid Fiedler, onikwe ilayisenisi kwi-About.com
Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zokuhamba ngebhayisikili , kunjalo.
Ukugqithisa iipedals zakho ezikhoyo zeetekisi ezingenakuqhafaza ngenye yezinto ezintle ongayenza ukuphucula ibhasi lakho. Ngeempapu ezingenanto, kungekuphela nje ukuqhuba iipedals kwi-stroke esezantsi kodwa ngoku uqhubeka uqhuba ngokunyanisekileyo njengoko uphakamisa imilenze yakho.
"I-clipless" ayikho into engavumelekanga. Kuvela kubungqina bokuba awukho ividyo zomtshini kwizithuthi zakho, kodwa abantu bahlala bedibanisa ukuba "ngokuchofoza," apho izicathulo zakho ezikhethiweyo zebhayisikili zivalela kwiintsika ezithweleyo eziziphetheyo.
Ukutshintsha kweemfesane yinkqubo ngokukhawuleza kwaye kulula, enye enoba abahamba ngebhayisikili baninzi abanokuzama ngaphandle koyiko. Konke okuya kuyidinga yesikhunta kunye neendleko zakho ezintsha.
Susa iiPedals ezikhoyo
Ukuhamba ngeempawu zomtshina. (c) uDavid Fiedler, onikwe ilayisenisi kwi-About.com
Into yokuqala okuza kufuneka uyenze ukukususa iipedals zakho ezikhoyo. Kungakhathaliseki ukuba unjani uhlobo lwezithuthi zokuhamba, inqubo yokuyithatha iya kuba yinto efanayo. Ezi zikhuni zineziqwenga zomzwane. Ngangenawo unyawo kwi-pedal, ubunzima besentiwe bangela ukuba i-pedal iphele.
Fumana i-Bolt yokukhupha i-Old Pedals
Khangela i-bolt ukukhulula iipedals ukusuka kwingalo yesikhala. (c) uDavid Fiedler, onikwe ilayisenisi kwi-About.com
Khangela i-bolt evula i-pedal kwi-crank ingalo. Kuphawulwe esithombeni esingentla.
Mkhulule i-Pedal kwi-Crank Arm
Susa izitya ezindala ukusuka kwingalo yesikrankki. (c) uDavid Fiedler, onikwe ilayisenisi kwi-About.com
Ukusebenzisa umkhonto ochanekileyo we-bolt, khulula i-pedal kwi-crank ingalo. Oku ngokuqhelekileyo kuya kuba yesikhunta sase- Allen (ngezinye izihlandlo esibizwa ngokuba ngumkhonto wehekisi ) esifaka emva. Ngamanye amaxesha uya kulufuna i-bell pedal wrench, eyinto yesigxobo esiqhelekileyo njengokuba uzakufumana kwisixhobo sakho sasekhaya, kuphela esincinci. Ndiyifumene ukuba amaxesha amaninzi i-home version isebenza kakuhle. Ukuba zonke izinto zihluleka, ivenkile yebhayisikili yakho yangaphakathi iya kukuvuyela ukukunceda ngale nto.
Into ebaluleke kakhulu ukuba uyikhumbule: ii-pedals zitshuntshwe ukuze umqhubi wama-cyclist ahlale 'eqinisa' umbhobho njengoko ekhwela. Oko kuthetha ukukhulula iipedals, kufuneka uguqule i-bolt indlela eyahlukileyo kunokuba i-crank ihamba xa uhamba. Ngethuba elisekunene kwebhayisikili, yonke into iyinto eqhelekileyo, kodwa kwisalathisi sesandla sokunxele, sabuyela emuva. Kukho, endaweni yokuqhelekileyo "intsalela-freey, inqununu" ibinzana abantu abayisebenzisayo ukukhumbula ukuba yiphi indlela yokuguqula imilenze, kwicala lasekhohlo litshintshiwe: uya kukhankanya isikhunya ngakwesokudla (ukujika kwesoloko) ukukhulula i-bolt .
Kungenzeka ukuba ezi zixhobo ziza kulungiswa kakuhle ngenxa yazo zonke iimbundini ezenza imilenze yakho enamandla xa uhamba. Kufuneka usebenze kubo, kodwa nje kuphela xa ubeka ingqalelo ukuwaphikisa ngendlela efanelekileyo, iipedals ziza kukhululeka. I-WD-40 echithwe ngayo kwaye ivumelekile ukuba igxilwe kuyo iza kubanceda baphinde bavule.
Inye yokugqibela: qiniseka ukuba ikhenketho lakho lisetyenziswe kwikhonkco enkulu kwi-front. Kanye xa i-wrench igqithisa kwaye udibanisa amaqhosha akho ngokumelene namazinyo okugaya, ukuba nekhenkethi ithetha ukuba uya kulukhupha kancane kunokuba ufumane umqubu.
Lubricate i-Crank Arm
Isalathisi esidala-isikhombiso sesicatshulwa sisuswe kwibhayisiki. (c) uDavid Fiedler, onikwe ilayisenisi kwi-About.com
Ngaloo makhonkco ngoku ususwe kwinqanaba le-crank, qinisekisa ukuba akukho mandla kumntu owamkelayo kwingalo yomnquba apho i-bolt evela kwi-pedal ingena. Sebenzisa ioli, gcoba intambo ngaphakathi kwinqanaba le-crank ekulungiseleleni ukufaka i-pedal entsha.
Faka iNew Pedals Clipes
Iifowuni zakho ezintsha zefowuni zifakiwe. (c) uDavid Fiedler, onikwe ilayisenisi kwi-About.com
Ukusebenzisa iminwe yakho, tyalela iipedals ezintsha kwiphonkco kwingalo yesikrankki. Kubalulekile ukwenza oku ngenyameko, ukuqinisekisa ukuba iipedals zihamba zicocekile. Oko kuqinisekisa ukuba akukho nquba ehamba phambili, eya kubangela ukuba iipedals zihambe zikhohlise kwaye ziwonakalise zombini i-pedal kunye nengalo ye-crank.
Emva kokuba unamanqamle izandla ezintsha, ungasebenzisa isikrulo ukuze uzincede ngokukhawuleza, kodwa ngokuqhelekileyo akudingekile ukuba usonge . Isenzo sakho sokunyathela siya kuba nanele ngokwaneleyo ukuzinzisa ngokwaneleyo kwaye kugcine zisasebenza.
Zama Izitsha Zakho ezingenakuqhafaza
Mashing the pedals. Jupiterimages / Getty
Kalokunje ukuba unayo i-pedals yakho entsha kwi-bike yakho, ixesha lokuba uzame. Nika izicathulo zakho ezihamba kakuhle zebhayisikili , zikhanye, kwaye uhambe. Kungenangqiqo ukwenza lo mgangatho wokugqibela kwindawo yokupaka i-low traffic okanye kwindawo efanayo apho kukho umda wephene xa ungasetyenzisanga i-pedals pedals ngaphambi. Ngokuqhelekileyo kuthatha ixesha elithile ukufumana ukucofa kunye nokuphuma kwezithuthi njengoko kuyimfuneko, kwaye ngokuqinisekileyo ufuna ukukwazi ukufumana ubuchule phambi kokuba uphume kwi-traffic.
Kwakhona, ukuba isigama sidideka, khumbula nje ukuba ii-pedals ezingenanto ezingasetyenzisiweyo zisetyenziselwa izicathulo ezikhethiweyo ezihamba ngeyona nto ukuzidibanisa ngqo kwiipedals. "Ayinakuqhafaza" kuba ziphuculo kwii-toeclips ezazisetyenziselwa ukugijima ngebhayisikili.
Ukuhlawula iSikolo sabangasese
ULouisa May Alcott Quotes
Indlela kaBuddha yeNwaba eya kuNwaba
AmaKhosi aseNyakatho Korea
Indlela Yokuqinisa Iinyawo Zakho zePointwork